Avy driverless fiara ny jetpacks - News Fitsipika
Avy driverless fiara ny jetpacks
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Avy driverless fiara ny jetpacks: hitsena ny teknolojia fanavaozana reshaping fitaterana” dia nosoratan'i Andy Meek, fa theguardian.com tamin'ny Asabotsy 14 Novambra 2015 14.13 UTC
New Zealand-monina Martin Aircraft ny flagship Company vokatra dia hafahafa manidina milina: ny jetpack izay mety toa toy ny hevi-dehibe avy amin'ny Sci-Fi sarimihetsika, raha tsy noho ny zava-misy fa ny tsara amin'ny lalana mankany amin'ny varotra.
Tamin'ny volana Oktobra, New Zealand Ny fiaramanidina sivily ny fahefana nanala ny orinasa nitranga fahiny 12 modely jetpack for nisian'ny sidina. Ny mpankafy-nalaza jetpack, rehefa naseho tamin'ny volana Jona tao amin'ny Paris Air Show, Manidina mety efa ho 1,000 metatra ary manidina dia hatramin'ny antsasaky ny ora. Ny orinasa jetpacks dia antenaina ho tonga ara-barotra misy kelin'ny ao amin'ny tapany faharoa ny 2016.
Ny jetpack ny fampandrosoana dia ohatra iray lehibe ny hevitra sy ny filokana lehibe natao manerana fitaterana-mifantoka orinasa, izay orinasa tahaka an'i Martin Aircraft dia nidobodoboka be ny lavitra sisin'ny ny inona no azo atao. Miaina amin'ny hantsana ny fiara ny fotoana dia ho "mizaka tena tanteraka mandritra ny fotoana maharitra", araka ny Filoha Tale Jeneralin'ny Tesla Elon Musk. Tamin'ny antso amin'ny herinaratra fiara mpanana petrabola volana ity, dia nomeny 15 ny 20 taona.
Misy be ny fitaterana hafa mpandraharaha amin'ny sary an-tsaina koa drafitra araka ny, avy amin'ny sambon izay mahatonga suborbital sidina ny aircrafts izay hanala ary tanety mitsangana.
The Guardian nanampy ho vitsivitsy ny fanavaozana ireo mba hahazo ny fahatsapana ny toerana ny hoavy ny fitaterana no nitodi-doha. Nanontany ny fomba zareo niresaka ny raiki-tampisaka olana ara-teknika, ary nahoana izy ireo no nanapa-kevitra mba ho amin'ity toerana eo amin'ny toerana voalohany. Inona no fanantenana hita dia fiarovana ho an'ny hoavy tsy ho ela izay strapping amin'ny jetpack mety ho toy ny ara-dalàna toy ny mahazo ny kodiarana aoriana.
Martin Aircraft mikasa ny hanomboka ny jetpack ao amin'ny tapany faharoa ny amin'ny herintaona. Ny orinasa nanome ny Guardian tamin'ny fihetsiketsehana ity lahatsary.
Martin Aircraft Tale Jeneralin'ny Peter Coker mahalala ny raharaham-barotra mety toa haorina amin'ny fantastically hitranga fahitana.
"Efa zanako izay nitaona ahy mba hanatevin-daharana ny orinasa,"Hoy Coker, na dia eo aza ny zava-tsarotra. "Izahay amin'ny fialan-tsasatra, ary ny zanako, izay miasa ho an'ny fampiasam-bola Boutique orinasa in London, ara-drariny nanipika: 'Nahoana no tsy te handray anjara amin'ny lehibe indrindra ao amin'ny fiaramanidina fiovana tamin'ny taonjato farany?' "
Maika mba hahazoana ny jetpacks ny tsena, 2015 dia notanterahina mamaritra zavatra iray taona ho ny orinasa, izay manana ao anatin'ny volana vitsivitsy izay no Fanidiana ny fifanarahana, fiaraha-miasa sy ny mampiseho ny famolavolana ny mety ho mpanjifa. Efa nitarina ny 53 ny olona manerana 13 firenena ary voasoratra ao amin'ny Hong Kong fifanakalozana tahiry.
Milaza ny ho avy ny jetpacks, Coker hifandrimbona ny "làlambe eny amin'ny lanitra", na ny "lafiny fahefatra ny fitaterana", izay eo ho eo ny olona dia afaka mandeha haingana avy amin'ny teboka iray hafa.
"Tsy tonga saina haingana ny jiro manodidina ny zavatra tahaka izao dia lehibe noho ny hoe manokana fotsiny jetpack,"Hoy Coker, teo aloha Lockheed Martin mpanatanteraka. "Izahay koa nahita fahafahana ara-barotra eo amin'ny sehatry - noho ny solika sy ny entona, fitrandrahana sy ny fambolena. "
Ny foto-kevitra momba ny mety ho toa jetpack manidina toy ny mafy hivarotany mampiahiahy mpampiasa vola, ary angamba ny tetezana lavitra loatra ny mety ho mpiara-miombon'antoka sy ny mpanjifa. Fa Coker lazain'ny vao nahita ny zavatra afaka manampy clinch ny fivarotana. Raha ny orinasa mampiseho sary na lahatsary avy amin'ny foto-kevitra na manolotra nitranga fahiny in hetsika, Coker milaza fa "avy hatrany no mahatonga ny nofy efa fony aho zanak'osy". Amin'ny lafiny sasany, hoy izy, mahazo izay Buy-in no mora anjara.
Tena azo antoka fa tsy sarotra noho surmounting ny raiki-tampisaka olana ara-teknika izay tonga miaraka amin'ny fananganana ny rafitra izay ahitana ny entona maotera sy roa mpankafy izay manome ny ilaina atraka.
"Rehefa mandray ny olona amin'ny alalan'ny filozofia ny fomba fiasan'ny - toy ny tsara rehetra fanavaozana, Tena sarotra lahateny izay toa tsotra - dia mahazo izany,"Hoy i Coker. "Izy ireo mahazo ny ilàna azy, ary isaky ny handeha hanolotra azy io any ho any, olona ihany koa ny tonga ny sasany fomba hafa mba hampiasa azy io. "
Ny foto-kevitra Tafiditra Next mahaleotena pods izay miresaka amin'izy samy izy. Industrial mpamorona Tommaso Gecchelin nanome ny Guardian amin'ny dikan ity.
Fitaterana fanavaozana toy ny jetpacks dia mandray eo isan-karazany amin'ny teny hafa - ny sasany mitombo miandalana, ny sasany fangadiana.
Driverless fiara teknolojia dia iray amin'ireo sehatra mafana indrindra amin'izao fotoana izao, amin'ny mpanamboatra avy amin'ny Ford an'i Mercedes-Benz nanao driverless teknolojia tsehatra. Sela Mpandray Hafanana sy assistive fahaiza-manao koa amin'ny lohahevitra ny tsaina Fitaterana Society of America ny hiverina hisaina fitaterana ho an'ny Next 30 Taona fihaonana an-tampony tamin'ny Oktobra in Washington DC.
Ny hanoto amin'ny fizakantena any am-pon'ny maro amin'izao fotoana izao fitaterana breakthroughs. Ao amin'ny telovolana fahatelo Tesla ny mpampiasa vola taratasy navoaka 3 Novambra, ny orinasa nanoratra fa, "Ny mpividy nandroaka ny fiara efa ho 250m kilaometatra telovolana ity, fa efa ho tanteraka ny 1.5bn kilaometatra hatramin'izao. "Tesla, ny taratasy mandeha ao amin'ny, dia miandrandra ny andro "rehefa afaka hilaza aminao ny fomba lavitra ny fiara efa nandroaka ny mpanjifa".
Toy izany ny hoavy dia noraisina tany aloha namarana ny Italiana injeniera sy ny orinasa mpamorona Tommaso Gecchelin. Ary ny sketched avy ny Modular hevitra dia ny miantso Manaraka izany dia manasongadina inona no ankapobeny pods herinaratra izay afaka mifandray sy hitsaharana amin'ny pods hafa raha ilaina, toy ny sasany futuristic fiaran-dalamby izay afaka manomboka kely ka maniry ny hanitatra, angorodao-fomba.
"Miorina eo amin'ny teknolojia sy ny mpampiasa fironana mila fanadihadiana … izany tena azo inoana fa amin'ny hoavy dia ho hitantsika ny revolisionera segmentation ny fitaterana tsena,"Hoy i Gecchelin. "Amin'ny lafiny iray, olombelona-nandroaka fiara dia ho toy ny soavaly ny fahatongavan'ny ny maotera fiara. Ary ny fanatanjahan-tena ho ambony fiara, tanàna raha fiara dia ho lasa tsy irina, manome toerana bebe kokoa ny manan-tsaina ny rafitra fitaterana izay hanome ny mahasoa kokoa sy fanatanterahana … dia lavitra sy commuting traikefa. "
Izy hifandrimbona ny Next hevitra tahaka fotsiny ny commuter modely. Mety avo roa heny toy ny fanompoana fanaterana rafitra, amin'ny raharaham-barotra, na hividy nanofa pods araka ny Aho ka naniraka azy feno entana ny mpanjifa ny an-trano.
Gecchelin milaza fa nanomboka nieritreritra momba ny vahaolana mifantoka manodidina ny "asa, fialam-boly sy ny-fangatahana tolotra [toa izay] fifamoivoizana Optimization ". Amin'izao fotoana izao, dia ny mitady famatsiam-bola mba hamela ny fanamboarana ny sambo voalohany mba hanehoana ny foto-kevitra ao amin'ny tontolo tena izy. Izy amin'izao fotoana izao ny miresaka amin'ny tanàna alemà vitsivitsy mikasika ny mety ho fiaraha-miasa.
"Izao no Namorona ny Robots sy ny teknolojia tena mitondra fiara dia hitarika ho amin'ny," hoy izy. "Intelligence sy ny tena mitondra fiara mamaha ny mety ho an'ny fiara ny miara-miasa tsara toy izany mitranga amin Manaraka."
Hafa noho ny ara-teknika vato misakana, iray amin'ireo sakana lehibe indrindra nijanona teo an-dalana ny fanavaozana toy izany dia ny toe-quo. Efa ho 17m fiara vaovao dia hamidy ary namely ny lalana any Etazonia amin'ity taona ity - fiara izay tsy ela dia niala ho ifotony fomba mahazo vaovao avy amin'ny hevitra iray ho amin'ny manaraka.
Elio Motors dia miasa mba hanatsara ny fiara tamin'ny telo-naterak'ireo kodiarantsika, môtô-toy ny foto-kevitra. Ny orinasa nanome ny Guardian tamin'ny lahatsary fampahafantarana ity.
Ao anatin'ny ezaka fanavaozana mifanaraka amin'ny toe-quo, Paul Elio hazo fisaka ny ilàna ny orinasa ny flagship fiara ny zavatra toy ny iPad. Toy izany koa ny takelaka dia tsy voaporofo ho PC mpamono olona, ​​fa kosa mameno mpampiasa misy isan-karazany ny fitaovana, Elio mahita ny orinasa ny fiara ho zavatra toy ny iPad ny mpanjifa ny garazy. Phoenix-monina Elio Motors dia maka baiko izao noho ny telo-naterak'ireo kodiarantsika, môtô-toy ny fiara izay mahazo 84 kilaometatra ny gallon sy izay mikasa ny handefa taona manaraka miaraka amin'ny takatry ny $6,800 mari-bidy.
"Mino aho fa manana zavatra toy izany hitranga,"Hoy i Elio, izay orinasa efa manana mihoatra noho 47,000 famandrihana noho ny fiara. "Izaho nipetraka tany New York City nandritra ny herintaona sy tapany, ary tia ny metro rafitra any. Rehefa manana izany habeny mponina, faobe asa fitaterana.
"Fa ny sisa amin'ny firenena, dia mazava ho azy fa na mila handrava ny tany manodidina azy rehetra, ary be mponina hamorona foibe na mahatakatra ny fomba mahomby kokoa mba hahazoana avy amin'ny tany manodidina ny downtowns izay miasa. "
“It’s got to be low-cost and high-mileage – it’s got to be both of those to work," hoy izy. “This is an ‘and’ choice, not an ‘or’ choice. So the concept is you buy the big vehicle for the reason you bought it, and you have an Elio too. You drive the Elio to work, and on Saturday you take out your SUV.”
“I think one of the biggest problems is the business model is broken,"Hoy i Elio, who says he’s dreamed about owning a car company with his name on it since he was a young boy. “The purchase of a car is such an enormous game, which is why we have the $6,800 figure. If you know what you want and there’s no financing issue, it shouldn’t take you five hours to buy a vehicle.”
The ultimate frontier for a transportation entrepreneur, mazava ho azy, is out of this world. California-based XCOR Aerospace has started selling tickets for flights on its Lynx series of suborbital vehicles, which will take passengers and payloads on a space trip up to 330,000 feet that lasts less than an hour.
Passengers will essentially be the co-pilot on the trip – the only other passenger on the voyage besides the pilot. Toy izany, they’ll be given a “call sign” and will be able to view space through the Lynx cockpit canopy that affords an expansive view of space.
Toy izany, the Lynx vessel can, hoy izy, take passengers essentially to the border of space. XCOR envisions starting test flights sometime next summer and putting them into commercial use six to 12 months after that, with commercial flights starting possibly in 2017.
“I think mankind is always trying to find its boundaries and go farther,"Hoy izy. “I think in the faraway future we’ll be living on multiple planets as a species. I’m convinced of that, Eny. Probably not in our lifetime, though.”
31161	0 Andy Meek, Article, Automotive industry, Business, Tontolo_iainana, Toetoetra, Teknolojia, Tesla, The future of transportation, Travel and transport, US vaovao, World vaovao
← Facebook fitiliana Snapchat fomba tena-destructing amin'ny chat in Messenger Ahoana no mahay kilao ny entana mety hanova ny fitaterana anabakabaka →